Best in Black Ụlọ Ndị - Imewe Mmewe
Ụlọ Ndị Nke kachasị mma na Black bụ oru ngo nke chọrọ imebe ụdị ụlọ obibi ọhụrụ. Designlọ a na-ahụ maka ime ụlọ na-anọchi anya usoro ihe eji arụ ọrụ ụlọ ọrụ Mexico, ihe ndị a họọrọ na-eme ka a mata ihe ịtụnanya na mpaghara ọha na anya dị mma maka ụlọ, nke a dị iche na ihu ọcha. Ejiri mmụọ akụkụ anọ ahụ doo anya n'ụzọ pụrụ iche na egwuregwu Tetris na-akpụzi mgbidi na windo ụlọ ahụ, na-ekepụta onmospheres ndị nwere ọkụ nke na-eweta nkasi obi maka onye ọrụ.
Aha oru ngo : Best in Black, Aha ndị na-emepụta ya : Fernando Valdez, Aha onye ahịa : Valdez Arquitectos.
Ụlọ Ndị Fernando Valdez Best in Black